Bit By Bit - ဆိုင်ရာကိုယ်ကျင့်တရား - 6.7.3 discrete, စဉ်ဆက်မပြတ်မအဖြစ်သုတေသနလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်၏စဉ်းစားပါ
ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်လူမှုရေးဆိုင်ရာသုတေသန၏ကျင့်ဝတ်နှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးငြင်းခုံမကြာခဏ binary စည်းကမ်းချက်များ၌ဖြစ်ပျက်; ဥပမာအားဖြင့်, စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဖြစ်စေခဲ့သည်သို့မဟုတ်ကြောင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒီဒွိစဉ်းစားတွေးခေါ်, ဆွေးနွေးမှု polarizes က Shared စံချိန်စံညွှန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတားဆီး, ပညာတတ်ပျင်းရိခြင်းကိုအားပေးအားမြှောက်, အဘယ်သူ၏သုတေသနလုပ်ငန်းပိုပြီး Ethics လုပျဆောငျဖို့သူတို့ရဲ့တာဝန်ကနေ "ကျင့်ဝတ်" အမည်တပ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်သုတေသီများ absolves ။ သုတေသနလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်ပတျသကျငါသိမြင်သွားပါပြီအရှိဆုံးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောစကားပြောဆိုချက်သုတေသနလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်နှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်အယူအဆဖို့ဒီဒွိစဉ်းစားတွေးခေါ် ကျော်လွန်. ရွှေ့။
သုတေသနကျင့်ဝတ်တစ် binary ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့်အတူအဓိကလက်တွေ့ကျတဲ့ပြဿနာကြောင့်ဆွေးနွေးမှု polarizes သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုကူးစက် Calling "သိက္ခာမဲ့" အထောကျအကူမဟုတျကွောငျးတစ်လမ်းအတွက်စစ်မှန်တဲ့ရက်စက်ယုတ်မာအတူကြောင့် lumps ။ အဲဒီအစား, ကသငျသညျပြဿနာရှာတွေ့သောလေ့လာမှု၏ရှုထောင့်နှင့် ပတ်သက်. အထူးသစကားပြောရန်ပိုပြီးအထောက်အကူဖြစ်စေခြင်းနှင့်သင့်လျော်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုသိက္ခာမဲ့အပြုအမူဖုံးကွယ်ဖို့စတငျလှဲမှားဘာသာစကားသုံးစွဲဖို့အတှကျအပယ်သွား binary တှေးအချေါနှငျ့ Polarized ဘာသာစကားမှရွေ့လျားဖုန်းခေါ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ အစား, ကျင့်ဝတ်တစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်အယူအဆ, ငါထင်, ပိုမိုသတိထားနှင့်တိကျသောဘာသာစကားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ထို့ပြင်သုတေသနကျင့်ဝတ်တစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်အယူအဆပြီးသား "ကျင့်ဝတ်" ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းအလုပ်လုပ်နေကြသူလူတိုင်း-ပင်သုတေသီများဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်အတွက်ပင်ပိုကောင်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာချိန်ခွင်လျှာကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားကြသည် -should ကြောင်းရှငျး။
စဉ်ဆက်မပြတ်စဉ်းစားတွေးခေါ်ဆီသို့ပြောင်းရွှေ့တစ်ဗိုလ်လုပွဲအကျိုးအတွက်ခက်ခဲကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများ၏မျက်နှာကိုအတွက်သင့်လျော်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ပညာတတ်နှိမျ့ခခြွငျးအားပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်အတွက်သုတေသနကျင့်ဝတ်များ၏မေးခွန်းများကိုခက်ခဲဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အဘယ်သူမျှမတစ်ခုတည်းလူတစ်လုပ်ဆောင်ချက်၏မှန်ကန်သောသင်တန်းရှာဖွေရေးမှာမှသူမ၏ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်အတွက်အလွန်အမင်းယုံကြည်မှုဖြစ်သင့်သည်။